Ababhali baseSpain: izibonelo zepeni lesifazane laseSpain | Izincwadi Zamanje
Izikhathi eziningi sinaka kakhulu ababhali bamanye amazwe kunababhali baseSpain, futhi lokho kwenzeka kithina kuzo zonke izigaba. Kuphela lapho umuntu waseSpain eqala ukwaziwa ngaphandle kwezwe lapho sinaka kakhulu kubo.
Kungakho namuhla sithandana gxila kubo bonke labo babhali abakhulu baseSpain, kusukela ngaphambili, kusukela manje, kusukela esikhathini esizayo, okufanele ube khona lapho ubuka khona, ukwesekwa futhi ngaphezu kwakho konke wazi imisebenzi yakhe. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi sikhuluma ngobani?
1 Ababhali abahle baseSpain okufanele ubazi
1.1 U-Almudena Grandes
1.2 UMaria Dueñas
1.3 UDolores Redondo
1.4 UMatilde Asensi
1.5 URosalia de Castro
1.6 U-Emilia Pardo Bazán
1.7 UCarmen de Burgos
1.8 Ababhali baseSpain: UGloria Fuertes
1.9 UCarmen Laforet
1.10 Ababhali baseSpain: Ana María Matute
1.11 Ababhali baseSpain: Espido Freire
1.12 U-Elvira omuhle
1.13 Ababhali baseSpain: Eva García Sáenz de Urturi
Ababhali abahle baseSpain okufanele ubazi
Sikuxwayisa kusengaphambili ukuthi ngeke sibabize bonke ababhali baseSpain abafanele ukuba sohlwini, ngoba asisoze sagcina, futhi sizokugcwalisa ngolwazi oluningi. Kepha sinesikhala esikhulu ngokwanele sokukutshela ngesinye Ukukhetha okuhle kwababhali okungafanele ulahlekelwe yikho.
U-Almudena Grandes ngumbhali ophumelelayo njengamanje futhi akumangalisi. Imisebenzi yakhe igxile kule noveli yesimanje, kepha iqiniso ukuthi uthinte ezinye izinhlobo ezingajwayelekile, ezinjengezocansi, neThe Age kaLulu. Omunye wemisebenzi yakhe yakamuva yi- The Patients of Doctor García.
Cishe yonke imisebenzi yakhe igxile ezinkathini zomlando. Futhi ukuthi yena wafunda iGeography noMlando (ephoqwa ngunina, yebo).
Ubuye abambe iqhaza kumakholamu ezintatheli, njengakwi-El País, noma emsakazweni, eCadena Ser.
Omunye wababhali baseSpain okufanele ubakhumbule nguMaría Dueñas. Igama kungenzeka ukuthi awulazi, kepha impela uma sithi "Isikhathi esiphakathi kwemikhumbi", izinto ziyashintsha, akunjalo? Ikakhulu ngenxa yokushintshashintsha kwe-serial okwenziwe.
Kahle UMaría Dueñas ungumbhali wayo futhi ungomunye wabaziswa kakhulu hhayi kuphela kuzwelonke, kepha nakwamanye amazwe.
Okwamanje, enye yezincwadi zakhe zakamuva ethi "The Captain's Daughters", kodwa impela ezinye eziningi zizofika (yize njengamanje ukuguqulwa okusha kwenye yamanoveli akhe, iLa tempelanza, kusasebenza.
Uma uya kuNetflix bese ufuna i-Baztán trilogy, uzothola amafilimu amathathu aphumelele kakhulu. Hhayi-ke, lawo mafilimu asuselwa ku-trilogy eyabhalwa nguDolores Redondo. Lo mbhali waseSpain naye owine umklomelo wePlanethi (the from the year 2016) lapho ethulwa khona Konke lokhu ngizokunika kufihlwe kusiteketiso (ukuze kungabikho muntu ozokwazi ukuthi bekunguye).
Ubelokhu efuna ukuba ngumbhali (eneminyaka eyi-14), yize empeleni empeleni wazinikezela ekudlaleni komzimba. Kwakuyisikhashana ngemuva kokuba abuyele "emaphusheni akhe eqiniso".
Ungahle ungamazi ngegama, kepha umazi ngezincwadi zakhe, ikakhulukazi nge "El Último Catón", incwadi eyaba nempumelelo enkulu emazweni omhlaba. Noma kunjalo, Ngaphandle kwale mpumelelo enkulu, eyangempela (nokuqashelwa okukhulu kakhulu) yayino "The Lost Origin.
Kamuva uqhubekile nokubhala izincwadi, ezinjenge- "The Return of the Caton", lapho abuya khona ukuzotakula udumo lomhlaba wonke amnikeza lona olwedlule. Okwamanje futhi uhlanganyela kweminye imidiya, ikakhulukazi eyezindaba.
URosalía wayengomunye wababhali abaphambili baseSpain esake saba nabo ezweni lethu. Waphila kusukela ngo-1837 kuya ku-1885 futhi wayengu- Imbongi yaseGalician esakhunjulwa nanamuhla. Akaziwa kakhulu njengezinye izimbongi zesilisa (ezinikezwe udumo oluthe xaxa), kepha akanalutho azobamonela.
Yini esingayincoma ngaye? Izingoma zaseGalician noma i-Follas novas.
U-Emilia Pardo Bazán
Futhi kusukela ngekhulu le-1851 (XNUMX), lo mbhali, u-Countess kaPardo Bazán, Wayengumbhali wezindaba, umbhali wamanoveli, owesifazane, imbongi, umhumushi, uprofesa, nokunye okuningi. Wayengomunye wabesifazane ababekwazi ukungena eRoyal Spanish Academy.
Ushone ngo-1921 futhi wasishiya nemisebenzi emikhulu, efana neLos pazos de Ulloa.
UCarmen de Burgos
UCarmen de Burgos wazalelwa e-Almería (ikakhulukazi eRodalquilar) kwathi lapho ehlukana nomyeni wakhe wayohlala eMadrid. Lapho wayeyintatheli nomlobi. Futhi yize bekufanele asebenzise igama mbumbulu (Colombine) kwezinye izindatshana noma ezincwadini, iqiniso yilokho Wayengomunye wabesifazane abakhulu abaphula isikhunta.
Kunemisebenzi eminingi yalo mbhali, enjengokuthi "Owesifazane omuhle", "Onedimoni likaJaca", "Ubuciko bokuba ngowesifazane (ubuhle nokuphelela)", "Ukuphela kwempi" ...
Ababhali baseSpain: UGloria Fuertes
UGloria Fuertes ungomunye wababhali abaziwa kakhulu baseSpain, ikakhulukazi ohlotsheni lwezingane. Kungenzeka ukuthi unencwadi njengamanje phakathi kwalabo abasegumbini lezingane zakho (uma unazo, uma ungaqiniseki ukuthi uyigcina kusukela ebuntwaneni bakho).
Kufanele wazi kusuka kulo mbhali ukuthi Wayezifundela futhi wabhala zombili izincwadi zezingane, ezaziwa kakhulu ngazo, kanye nezincwadi zabantu abadala (lokho akwaziwa kakhulu abanye). Ngaphezu kwalokho, wenza izinyathelo zakhe zokuqala ekubhaleni imidlalo yaseshashalazini noma ekubhaleni omagazini.
Lo mbhali wayeneziqu ezinkulu kakhulu. Futhi yilokho, Eminyakeni engama-23, wayesevele ewine umklomelo weNadal Novel. Akazange abhale okuningi njengabanye ababhali, kodwa kunemisebenzi ethile okufanele uyibheke, ngaphezu kwalowo owine indondo, uLutho.
Ababhali baseSpain: Ana María Matute
Lo mbhali, oqanjwe njengombhali wamanoveli ohamba phambili ngemuva kwempi, usishiyele iziqu ezinjenge-King Forgotten King Gudú noma i-First Memory, imisebenzi emibili ebaluleke kakhulu. Bekuyi Ilungu leRoyal Academy of Letters futhi wawina imiklomelo eminingi.
Ngokudabukisayo, wadlula emhlabeni ngo-2014.
Ababhali baseSpain: Espido Freire
Lo mbhali uphethe irekhodi lokuba ngu- umbhali omncane kunabo bonke ukuwina umklomelo wePlanethi (Oneminyaka engu-25). Leyo noveli kwakungamapentshisi afriziwe futhi ngomunye wemisebenzi yakhe emihle kakhulu, yize amanye amaningi eza kamuva.
Ngo-Elvira Lindo enye yezincwadi okungenzeka ufundile ekaManolito Gafotas, akunjalo? Lo mbhali ukwenze konke, hhayi imibhalo yezingane nentsha kuphela, kodwa futhi nombhalo wethelevishini nowamafilimu. Njengamanje usebenzisana e-El País.
Ababhali baseSpain: Eva García Sáenz de Urturi
Ungomunye wababhali baseSpain onikeza okuningi ukukhuluma, ikakhulukazi ngemuva kwe-trilogy yedolobha elimhlophe, izincwadi ezintathu ezisheshayo ongeke uziphuthe (nazo zaziyisiqalo salo mbhali).
Kulokho kufanele sengeze ukuthi yi- ophumelele umklomelo wePlanet 2020 no-Aquitaine.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Abalobi baseSpain
INkosi yamaRings series